]Ndị na-emepụta igwe na-ekpo ọkụ / oyi na-atụ & ndị na-eweta | Ụlọ ọrụ Shangrui
Ngwaahịa Shangrui, nhọrọ dị elu, ụlọ ọrụ | Shangrui Machinery bụ ọkachamara na-arụ ọrụ osisi, ndị na-ebu ihe na-emepụta ngwá ụlọ.
Igwe Mgbakọ Frame
Igwe na-egwe ọka ngwụcha
Ụlọ > Ngwaahịa > Igwe pịa
Hot Press Machine: Kwesịrị ekwesị maka ọkara ma ọ bụ obere mmadụ mere osisi ngwá ụlọ ụlọ mmepụta ihe abụọ nhazi ụlọ mmepụta ihe, na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ igwe nrapado ngwá ụlọ panel , ụlọ nkebi , osisi ụzọ (gluu na thinartificial efere na n'ime igbe) na a dịgasị iche iche nke wuru osisi. : dị ka plywoodboard , MDF , melamine eji achọ ákwà , fireproof osisi , metal foil , artificial na eke micro thin wood , eke osisi mosaic; nwekwara ike iji dị ka veneer ihicha larịị , larịị , agba ji achọ osisi ntọala.
Igwe igwe na-ekpo ọkụ oyi: A na-ejikarị ya na ụlọ mmepụta ihe nke osisi, ihe mkpuchi mgbidi dị n'èzí, ụlọ ọrụ panel panel panel na ịpị, nhazi ọkwa. Mee ya na usoro nke gluu akọrọ, ọ dịghị mfe ịmepụta
Deformation na degumming. Ọ na-ọtụtụ-eji osisi ụzọ factory, ebuanu, nkebi, mejupụtara, mgbe mkpuchi gluu ịpị.
Igwe oyi akwa dị mfe iji rụọ ọrụ ma dị mfe iji. The dum igwe adopts ọwa ígwè na ígwè efere Ọdịdị na na-welded n'ozuzu. Ọdịdị ahụ siri ike. Mmanụ cylinder nakweere
Nchara siri ike siri ike, annealed, chrome plated, ike kwụsiri ike, adịghị mfe imebi. Emere panel ahụ nke aluminom alloy. N'oge njem njem dị anya, a na-eme panel nke aluminum alloy
A gaghị enwe mgbaji. Igwe igwe oyi akwa nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara agafeela asambodo CE ma na-ere ya nke ọma n'ahịa ụlọ na nke mba ọzọ. Ngwá ọrụ Shangrui,
Ọ's naanị gị nhọrọ na ihe nnọchianya nke akụ na ụba e kere eke.
Igwe nrụnye oyi na-atụ ahaziri nke ejiri n'ụlọ nrụpụta osisi ụzọ
]Oyi pịa: A na-eji ya eme ihe na ụlọ mmepụta ihe nke osisi, ihe mkpuchi mgbidi dị n'èzí, ụlọ ọrụ panel panel panel na ịpị, nhazi ọkwa. Mee ya na usoro nke gluu akọrọ, ọ dịghị mfe ịmepụtaDeformation na degumming. Ọ na-ọtụtụ-eji osisi ụzọ factory, ebuanu, nkebi, mejupụtara, mgbe mkpuchi gluu ịpị.Igwe oyi na-atụ dị mfe iji rụọ ọrụ ma dị mfe iji. The dum igwe adopts ọwa ígwè na ígwè efere Ọdịdị na na-welded n'ozuzu. Ọdịdị ahụ siri ike. Mmanụ cylinder nakweereNchara siri ike siri ike, annealed, chrome plated, ike kwụsiri ike, adịghị mfe imebi. Emere panel ahụ nke aluminom alloy. N'oge njem njem dị anya, a na-eme panel nke aluminum alloyA gaghị enwe mgbaji. Igwe oyi na-atụ nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara agafeela asambodo CE ma na-ere ya nke ọma n'ahịa ụlọ na nke mba ọzọ. Ngwá ọrụ Shangrui,Ọ bụ naanị nhọrọ gị yana akara nke imepụta akụ na ụba.
Igwe igwe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ kwesịrị ekwesị maka ụlọ ọrụ na-emepụta ihe na-arụ ọrụ nke ọma ma ọ bụ obere osisi mmadụ mere
]Kwesịrị ekwesị maka ọkara ma ọ bụ obere mmadụ mere osisi arịa ụlọ mmepụta ihe abụọ nhazi ụlọ mmepụta ihe, na-ekpo ọkụ na ịpị nrapado ngwá ụlọ panel , ụlọ nkebi , osisi ụzọ (gluu na thinartificial efere na n'ime igbe) na a dịgasị iche iche nke wuru osisi: dị ka plywoodboard . MDF, melamine ihe eji achọ mma, bọọdụ ọkụ, foil metal, artificial na eke micro thin wood, mosaic osisi eke; nwekwara ike iji dị ka veneer ihicha larịị , larịị , agba ji achọ osisi set
Ahaziri multilayer fireproof bọọdụ ọkụ pịa igwe eji eme ihe maka ụlọ ọrụ arịa ụlọ
]Kwesịrị ekwesị maka ọkara ma ọ bụ obere mmadụ mere osisi arịa ụlọ mmepụta ihe abụọ nhazi ụlọ mmepụta ihe, na-ekpo ọkụ na ịpị nrapado ngwá ụlọ panel , ụlọ nkebi , osisi ụzọ (gluu na thinartificial efere na n'ime igbe) na a dịgasị iche iche nke wuru osisi: dị ka plywoodboard . MDF, melamine ihe eji achọ mma, bọọdụ ọkụ, foil metal, artificial na eke micro thin wood, mosaic osisi eke; nwekwara ike iji dị ka veneer ihicha larịị , larịị , agba ji achọ osisi ntọala.